ဓာတ်ပုံ ပိုစ့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ဓာတ်ပုံ ပိုစ့်
Posted by Mလုလင္ on Jun 21, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 68 comments
ခုတလော . ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်ဘူး .. ဒါပေမယ့် .. ကင်မရာတော့ တလွယ်လွယ် ပဲ လက်ကကို မချတာ သွားလေရာ တကားကားပဲ။
ကြည့်ရတာ နောက်လဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် တဖြည်းဖြည်း နည်းသွားနိုင်တော့ .. ပိုစ့်တစ် ပိုစ့် အတွက် ပုံစုတာ ၆ လ လောက် ကြာသွားမလားပဲ …။
ကဲ .. အခု ပိုစ့် က တော့ ပုံစု ရင်း ရိုက်ရင်း ၂ လ ကျော် လောက် ကြာသွားတယ် ..
ဒီကြားထဲ စိတ်အခန့်မသင့် တဲ့ အခါ နဲ့ မို့ comment တွေမှာ ဒေါသသင့် သွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ …
စိတ်ထဲလဲ မထားပါဘူး .. ပြောပြီး – ပြီးတာပါပဲ။ အပြောခံ ရလဲ .. စိတ်ထဲမထားပါဘူး။
ကဲ .. ဒီနှစ်လ ထဲ ရိုက်ဖြစ်ပြီး စိတ်ထဲ နဲနဲ တွေ့တာလေးတွေ ဗျာ …။ (စိတ်ထဲ တော်တော် တွေ့တာလဲမရှိ။ :cry:)
မြို ့ပြရဲ့ ညနေ
ပဲခူး – လေးမျက်နှာ ဘုရား
ဒီရက်ထဲ လုပ်မယ့် ပြပွဲ (ချစ်စရာ့ အရွယ်) အတွက် ပုံရှာ မရ .. ပါ။ idea ရသော်လဲ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ပါ။ ပြပွဲတိုင်း ဝင်ပြ ဖြစ်အောင် ပြမယ် ဟုအားခဲထားပါသော်လည်း ဘယ်လို မှဖြစ်နိုင်ခဲ့။ အရင် ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ လက်ဆောင် က တော့ Memory Stick တစ်ချောင်းပါ။ နောက် လတွေ တော့ မဖြစ်ဖြစ် အောင် ပြ ဖြစ်အောင် ပြပါ့မယ် လို့ ကတိပြုရင်း …
ကျွန်တော် မေ့သွားလို့ တောင်းပန်ပါတယ် အစ်ကို .. မှတ်ထားပေးပါဗျာ .. ခုရက်က အလုပ် များ နေလို့ပါ .
ကျွန်တော်လည်း မရိုက်ဖြစ်သေးဘူး .. နောက်တစ်ပတ်ထဲ ပြပွဲက ဓာတ်ပုံတွေ တင်တော့မှာ ..
ကျွန်တော်လည်း ပြပွဲတိုင်းကို ဝင်ပြ ချင်ပါတယ်.. အတွေ့အကြုံ အကြံဉာဏ် စိတ်ကူး ပညာ အသစ်တွေ ရရှိနိုင်တယ်လို့ ထင်လို့ပါ.. အလင်းရောင် ဆိုတဲ့ပုံကို သဘောကျ ပါတယ်.. အကြည့်က သူ့ထက် နည်းနည်းလောက် ပိုဝိုက် ရင် ကျွန်တော်တော့ပိုကြိုက်တယ်. . အလင်းတံခါးက ပေးသော ဓါတ်ပုံရသ ဆိုတဲ့ အခန်းဆက် ကိုကျွန်တော် လေ့လာနေပါတယ်..ရွာထဲ တိုင်ပင်ကြည့်ချင်ပါတယ်..
နောက်ကလိုက်လို့ရအောင် ခြေရာတော့ ဖျောက်မသွားပါနဲ့နော် ..
ချစ်ရင်ထူးနှစ်ကလဲ .. နောက် နှစ်လ စာအတွက် memory Stick နှစ်ချောင်းပါတဲ့ … အခု ထိုင်ရမယ့် ကွမ်းယာဆိုင် မှာ အင်တာနက် တပ် ဖြစ်ရင်တော့ အမြဲ တွေ့ရမှာဟေ့ … ကွမ်းယာသည် နဲ့ အင်တာနက် လားလား မှ မဆိုင် ဘူး ဆိုပြီး ပါမစ် မရရင်တော့ … ညဘက်ပိုင်းလေး မျှသာ ….
အလင်း ရောင် ဆိုတဲ့ ပုံလေး ကို သဘောကျတယ်ဗျာ ! အခန်း မီးပိတ်ပြီး ကြည့်တယ်၊ ဖယောင်း တိုင် မီးက အသက်ဝင်တယ်၊ အားပေးသွားတယ်ဗျာ၊
အို အသင် လုလင်၏ ရိုက်ချက်တွေ ကောင်းလှချေတကား အားကျမိပေ၏
နာမည်ထိုးတဲ့ စာလုံးဆိုဒ်တော့ နည်းနည်းလျော့ပါအေ ကော်ပီရိုက်ပေမဲ့ ပုံတွေကြည့်ရတာ အရသာ နည်းနည်းပျက်တယ်။
ဒါနဲ့ နံပါတ်လေးပုံက ဟိုဂျာပွန်ဂ အားကိုကြီး ပြောပြောနေဒဲ့ အကျိ…အကျိ ဆိုဒါလေးလား….ခုမှမြင်ဘူးတော့တယ်..
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုရင်မောင် ရေ ..။
ဖယောင်းတိုင် ပုံ က F1.8 နဲ့ ဖွင့်ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ အစ်ကို ….။ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းပါ။ share ချင်ရင် share နိုင်အောင် အဲ့ဒီ့ ပုံကို ကျွန်တော် ရေစာ မထည့်ထားပါဘူး။ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
တော့ ကရဲစည် ဒစ်စကောင့် ချပြီလား ဗျို့…. မျှော်နေတယ် နော့ ….။ နောက်ပုံတွေ မှာ နဲနဲ လျှော့ပါ့မယ်ဗျာ … ကျေးဇူးပါဗျို့…။
ဓါတ်ပုံတွေ က ရေလည် မိုက်တယ်.. အားကျချက်တော့..ကင်မလာကလည်းကောင်းမှ ကောင်းလား ပဲထင်ပါ့
ရန်ကုန်လာတုံးအမှတ်မထင်တွေ့ခဲရတဲ့ ကိုရင်လေးတွေ တရားထိုင်နေတာကို ကြိုက်တယ်။
ဦးပေါက် ရေ … အဲ့ ပုံလေးကတော့ အမှတ်တရပါပဲဗျာ … မအိ ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ။
လက်ရာမြောက်လိုက်တာကွယ်.. အကုန်လုံး ကြိုက်တယ်…
we R one နဲ့ Mon Kit ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ … ဝမ်းသာပါတယ်။
အသံရဲ့ အပြင်ဘက် ပုံလေးကြိုက်တယ်…
ဒီတစ်ခေါက် ရန်ကုန်လာရင် ကင်မရာ ယူခဲ့မယ် …..
အားရင် အတူတူ ပစ်ကြတာပေါ့။
ကျွန်တော် က ပုသိမ် ဘက် သွားချင်တာဗျာ။ သီတင်းကျွတ် ကိုစောင့်မယ်ဗျို့..။
ကိုကြီးလုရေ………….. အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်။ Noble Silence နဲ့ အသံရဲ့ အပြင်ဘက် ပုံတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ အားပေးသွားတယ်နော်။ နောင်လည်းအားပေးနေပါဦးမယ်။
ပြောဖို့မေ့သွားလို့ လာပြန်ပြောတာ။ ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကူးပြီး facebook မှာတင်ခွင့်ပြုပါနော်။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပါ။ အမြန်ပြန်ပြောပေးနော်။
reply နောက်ကျတဲ့ အတွက် .. တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ … တင်ခွင့်ပြုပါတယ် ခင်ဗျာ …။ ဒါနဲ့ mgyinaung@gmail.com နဲ့ facebook မှာ ရှာ ပြီး friend request လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ပုံတွေ ပို share နိုင် မှာခင်ဗျ … ကျွန်တော် က facebook မှာ ပုံ ပိုတင် ဖြစ်တယ်။ ရွာထဲမှာ ကျ .. ပိုစ့် ဖြစ်အောင် ပုံ စု ရသေးသကိုးဗျ ..။
ဪ ………….. ဂလိုလား။ အဲဒါဆို friend request လုပ်လိုက်မယ်နော်။
စကားအတင်းစပ်လို့ပြောမယ်နော်။ တောင်းတော့မပန်ပါနဲ့။ မလှလို့။ ဓာတ်ပုံထဲက ပန်းလေးပဲပန်လိုက်နော်။
Worked at Programmer (java, javaEE) (Programmer (java, javaEE))
Studied at UCSY
ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံကုန်းကုန်းကွကွ ရိုက်နေတဲ့ ပုံကို တင်ထားတာ ကိုကြီးလုရဲ့ facebook များလားဟင်။ သေချာမှ friend request လုပ်ချင်လို့။ မြန်မြန်ပြောနော်။ ဒါပဲ။ ဂလောက်။
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ .. ကုန်းကုန်းကွကွ လောက်ပဲ မန့်မယ် ဆို .. ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါ့ :angry:
ပုံတွေအားလုံးကိုကြိုက်တယ်။ အားပေးသွားပါတယ်။ ပုံလှလှလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။
ကို လုင်ရေ မြို့ပြရဲ့ညနေကိုကြည့်ပြီး တခုခုကိုခံစားမိတယ် ဘာကြီးမှန်းတော့မပြောတတ်။
လာလေ့ ဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး သူရေရပါ့မလားလို့စိတ်ပူသွားတယ်။
အစ်မ သဲနုအေး နဲ့ အစ်မ ရွှေကြည် ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ … မြို ့ပြရဲ့ညနေ ဆိုတဲ့ ပုံက သာကေတ ဘက် သွားတဲ့ တံတားပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာပါ။ ခုတစ်လော ကျွန်တော် သာကေတ ဘက်သွားသွား နေရတယ်ဗျာ .. ပတ်ဝန်းကျင် အသစ် .. လူအသစ် တွေနဲ့ နေ့တိုင်း စိတ်ပင်ပန်း ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြို ့ပြရဲ့ ညနေ ပုံ မှာ ကျွန်တော့ ပင်ပန်းမှုတွေ စီးဝင် သွားတာနဲ့ တူပါရဲ့။
ကိုဂီရေ့ အပေါ်ကဒါ့ပုံတွေထဲမှာ ကိုဂီ့အကျိလေးပါတယ်နော်
အားနေ …နာ့ အကျိ ပဲ လာလာ ခလုတ်တိုက် နေတာပဲ …
အင်း …ဘာလိုလိုနဲ့ အကျိ ကို ဒါ့ပုံမရိုက်ရတာတောင်
ကြာပြီပဲ …. အော်.. အကျိ အကျိ..
ကိုလုလင်အကြည့်ကတော့ အထီးထင်တယ်နော် ….
ဘယ်လိုု ကြည့်ပြီး အထီး အမ ခွဲလိုက်တာလဲ ဗျ။
ဟုတ်တယ်ဗျို့.. ဘဝ ဆိုတာကလဲ .. အဆုံး တစ်နေရာ စီကို သွားနေရခြင်း ပဲ မဟုတ်လား .. အကြည့် အတွက် ကတော့ တိုက်ဆိုင်ခြင်း သက်သက် ဟုသာ မှတ်ယူ စေလိုပါကြောင်း … ခို က ကြည့်နေပုံက မိုက်ကြည့်ဆိုတော့ တီတီ ဝေဝေ မန့်သလို .. အထီး ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ..။
အလင်းရောင် ရဲ့ အကြည့် တစ်ချက်ကြောင့်
အသံရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားမိတယ်
လှတာ မိုက်တာကလွဲလို့ကျန်တာမပြောတတ်ပါဝေ..
ပုံအားလုံးကို အကြိုက်တွေ ့မိပါတယ် ခင်ဗျား
ဇွန်ဖြူလေး … ဟိဟိ
ကျေးဇူးပါဗျာ … ဝမ်းသာပါတယ်။
အူးလေးက နောက် ဘာလို့ အရိုက်နည်းသွားတော့မှာတုန်းဗျာ…
နောက်ပိုင်း ဖိုတို ဝပ်ရှော့လေးဘာလေး လုပ်မလား တွေးနေတဲ့ဟာ..
သများတော့ ဖမ်းဝဲ ဒုက္ခပေးလို့ … ရိုက်ကို ရိုက်လို့မရတော့တာ…
ဘယ်ကတ်ထည့်ထည့် ရွိုက်ပရိုတတက် ပဲပြနေလို့ လေနေပါတယ်ရှို…
လာလေ့ ကိုတော့ အမှတ်တရ ရှိနေပီး ကျေးကျေးတင်ပါကြောင်း…
စကားမစပ် အပေါ်က ဒုတိယမြောက်အချောင်းက ကျနော့် အချောင်း
ခြေချုပ်မိတော့မယ့် ကိစ္စ လေးတွေ ဖြစ်ကာနီးလာလို့ပါဗျာ …
ကိုလုလင်တို့ကတော့ … တပုဒ်ဆိုလျှင် တပုဒ်ဆိုသလောက် လက်ရာကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ထင်ထားတာပါလား … ။ ဓါတ်ပုံအားလုံးကို ကြိုက်တယ် …. ဒါပေမယ့် မြို့ပြရဲ့ ညနေနဲ့ အကြည့်ကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ ။
အကြည့်က မဟာ ဝိဇယ မှာ ရိုက်တာပါ။ အဲ့မှာ ခိုတွေက လူနဲ့ လက်တကမ်း အထိ လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါလေး ..။
Photography by ရင်အောင်ဆိုတော့…Today နှစ်ပတ်လည်တုန်းက ဆုရတဲ့တစ်ယောက်လား..
လက်ရာတွေကတော့ ကောင်းတယ်ဗျို့… ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားရဦးမယ်…အားပေးတယ်ဗျာ
များများတင်တော့ များများအမြင်ရတယ်ဗျို့….အသံရဲ့အပြင်ဘက် ဆိုတာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ..
စကားမစပ် သူ့ location သိရမလား…ဓါတ်ပုံဆရာကြီးတွေ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေထဲမှာ အဲ့လိုခပ်ဆင်ဆင်တင်ထားတာတွေ့ဘူးတယ်…ကိုကျော်ကျော်ဝင်း ထဲမှာထင်တယ်…အားကျတယ်ဗျာ..
ကိုရွှေထီးရေ .. ပဲခူး က ကိုးသိန်းကိုးသန်း နားက မဟာကြီး ဘုရား မှာပါ။ ပဲခူးက ပုံတော်တော် များများကတော့ တူနေထပ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော် တို့လဲ ဆရာ ကျော်ကျော်ဝင်း(MPS) နဲ့ တခြား ကြားဆရာ၊ မြင်ဆရာ ၊ သင်ဆရာ … ပုံတွေကြည့်ပြီး ကြီးလာတာမို့ idea တွေ ထပ်နေတာ ဖြစ်နိုင် (ဖြစ်ကိုဖြစ်) ပါတယ်။ ပဲခူး မှာ ရိုက်ရင်တော့ ကျိန်းသေ ပုံထပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံ သင်တန်း တွေ outdoor ထွက် ရင် ပဲခူး ကိုအထွက်များတာမို့ပါ။ ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံ အရ ဆိုရင် ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံက ပညာပိုင်း အမှတ်တူနေရင် .. ရိုက်ရ ခက်ခဲမှု တနည်း high angle သုံးမှု နဲ့ နေရာ အသစ် ဖြစ်မှု ၊ photographer ရဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲ ခံနိုင်မှု တို့ကို ကြည့်ပါကြောင်း…။
ပဲခူးမှာလား ကျွန်တော်က စစ်ကိုင်းမှာထင်လို့…ကျေးဇူးပဲဗျို့..ဒီတစ်ခါ ပဲခူးသွားရင် ကင်မရာယူသွားရမယ်….ကိုလုလင်တို့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုလည်းယူသွားရမယ်…ဟဲဟဲ
သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ ထဲပါတာပေ့ါ၊ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ကြိုးစားရဦးမယ်….ဝါသနာ..
အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ အလင်းရောင်၊ လေးမျက်နှာဘုရားပုံကို ပိုသဘောကျတယ်ခင်ဗျာ
ကိုလုင်ရေ၊ ဘကြီးတော့ အကုန်ကြိုက်သဗျား။
myanmarcitizen နဲ့ ba gyi ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ။ လေးမျက်နှာ ဘုရားက ညဘက် ရိုက်တဲ့ ပုံ မတွေ့ဘူးလို့ … အဲဒါ ပဲခူး မှာ ညအိပ် ပြီး သွားရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။
ပုံကောင်းကို စာကောင်းလေးနဲ့ တွဲပေးလိုက်တော့ ပုံရဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေ ပိုပြီး ပေါ်လွင်သွားတယ်။
အားလုံးကို သဘောကျတယ်။ ဒီလိုလက်ရာနဲ့သာ ဝင်ပြလို့ကတော့ သူများတွေ နောက်ရောက်ကုန်မှာပေါ့။နည်းနည်းလေးတော့ လျှော့ပါဦး ဆရာရယ်… သင်စရာတွေ များလှပါတယ်လေ။ ခုမှ စာအုပ်ထုတ်ပြီး သေချာမှတ်နေတုန်းနော်။
ပုံစာလေးတွေကြောင့် လှပြီးသားပုံလေးတွေ ပိုလှသွားပါတယ်။
လာလေ့ က တော့ ပုံထက် စာက ပို ကောင်း(ကြည့်ရင်းပြုံးလေးပါ)
ဦးဦးပါလေရာ၊ တီတီ padonmar၊ တီတီ မမ နဲ့ အစ်မ မနောဖြူလေး ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ.. ကျန်းမာပါစေ။ လာလေ့ က စိမ်းလန်းစိုပြည် မှာ ရိုက်ထားတာ ပါတီတီ padonmar ရေ …။
ချစ်စရာ့ အရွယ် မှာ ကွက်တိ မှီ ပါစေဗျာ …။
ဒီတစ်ခါ မင်းမန်းလေးလာရင် မင်းမရောက်သေးတဲ့နေရာက အလှတွေသွားဆော်မယ်။
မောင်ပုအကြိုက်ထန်းတောနဲ့ ကြက်တို်က်တာကို သခင်မတောင်ခြေက အိမ်ရှေ့မင်းဆီသွားမယ်ကွာ
ဘဝက နောက်က ဦးထုတ်ကြီး ဖျက်သဗျာ …
အဲဒီ့ ဦးထုပ်ကို ယူပြီး လွှတ်ပစ်လိုက် …
စဉ်းစားနေတယ် ဦးပေါက်ရေ ..
ဘဝ ဆိုတာလေး နှစ်ခြိုက်တယ်။
အဆုံး ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။
ရထားတွဲကြည့်ရတာ ဂတ်တွဲထင်ပါရဲ ့။
ဦးပေါက် နဲ့ .. ကိုမှော် ရေ .. photo trip ထွက်ဖို့ကို တော်တော် စိတ်ပြင်းပြ နေပါတယ်ဗျို့…..။
မာမီ ကြီးရေ .. အဲ့ဒီ့ “ဘဝ” ကို ကြံခင်းကအပြန် မြန်အောင် မရောက်ခင် မှာ ရိုက်ခဲ့ပါကြောင်း ….. ကျွန်တော် လဲ အဲ့ဒီ့ အဆုံး ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုကြိုက်လို့ ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ ….။ အဲ့ဒီ့ ဘဝ ဆိုတဲ့ ပုံအတွက် .. ကိုမှော်၊ အူးချစ်ရင်ထူး နဲ့ ကိုမတ် တို့ကို ကျေးဇူး တင်ပါကြောင်းပါ။ ဘာတွဲလဲတော့ သိဘူး မာမီကြီးရဲ့။ ကိုမှော် ရေ .. ရိုက်တုန်းက ဇောနဲ့ မို့ အဲ့ဒီ့ ဦးထုပ် ကြီး မမြင်မိဘူးဗျာ … နာတာပဲ ..
ကိုလုလင် ရဲ့ ဘဝ ရိုက်ကွင်းထဲ မိုင်းထောင်တဲ့သူပုန်တကောင်ပါသေးဆို..
ဟုတ်ပါ့ အသားမဲမဲနဲ့ သူပုန်တစ်ကောင် ရထားလမ်းကို မိုင်းထောင်နေတာလေ …
သရက်သီး မျက်နှာ နဲ့ ဖျက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ လက်နက်တွေလဲ ကြောက်ရသေးသကိုးဗျ ….။ဒါနဲ့ အဲ့ တစ်ယောက် ရခိုင် ကနေပြန်ရောက်နေပြီ မလား … ???
mamanoyar နဲ့ ညလေး ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ …. ညလေး .. ငါ့ညီမ ရဲ့ PRO လက်ရာကို ချစ်စရာ့ အရွယ် မှာ ကြည့်မယ်နော့ .. မျှော်နေမယ်။
Noble Silence ပုံလေးက အတွေးတစ်ခုခု ပေးနေသလိုလိုပဲ
လာလေ့ တဲ့ စာသားကြောင့် ပုံ က ပိုရုပ်ကြွသွားသလိုပဲ…..ငယ်ငယ်တုန်းက စိုက်ခင်းတွေဆီသွားရင် ရေခပ် ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ်…..:(
ကြိုက်တယ် ဗျာ ၊ရွာထဲက ဆရာများ လေးစားပါရဲ့ ဗျာ ၊တကယ့် ဆရာတွေပါဘဲ သိပ်သဘောကျတယ်ဗျာ
သမီးကြီး နဲ့ sugar sugar ရေ . .ကျေးဇူးပါဗျာ။ Noble Silence ဆိုတဲ့ ပုံက မော်လမြိုင် ဖားအောက် တောရ က သိမ် မှာ စုပေါင်းတရား ထိုင်နေတုန်း ရိုက်ခဲ့တာပါ။ လူထွက်မယ့် နေ့ .. ရန်ကုန် မပြန်ခင် လေး သွားရိုက်ထားဖြစ်တာမို့ …. ကျွန်တော့ အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်တဲ့ပုံပါ။ Noble Silence ဆိုတဲ့ နံမည် က တော့ အဲ့ဒီ့ သိမ် မှာ ကပ်ထားတဲ့ စာတန်း လေးပါ။ Foriegner များတဲ့ တရားစခန်း မို့ အင်္ဂလိပ် လိုတာ စာရေး ကပ်ထားတယ် ထင်မိပါတယ်။
မြို ့ပြရဲ့ညနေ ပုံ ကို သာကေတ တံတားပေါ်ကနေ ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ် လောက်မှာရိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ ပိုလှ နိုင်ပါတယ်။ တိမ် လှတဲ့နေ့ကိုစောင့်ရိုက်နိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေ နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘဝ ပုံကို အမတ်မင်း၊မှော်ဆရာ၊ချစ်ရင်ထူးနှစ် တို့နဲ့ တူတူရိုက်ပါတယ်။ ကြံခင်း မြို့ကအပြန် မြန်အောင်ဝင်ခါနီး က ရထားလမ်းမှာ ရိုက်ပါတယ်။edition software လွန်လွန်ကျူးကျူးသုံးထားပါတယ်။ဒီပုံအတွက် အပေါ်က သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလင်းရောင် ပုံကို အိမ်မှာပဲ ရိုက်ပါတယ်။ F1.8 lens လေးလက်ထဲရောက်တုန်း ရိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီပုံအတွက် NH Photography နဲ့ Ye Kyaw Zaw ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကြည့် ပုံကို မဟာဝိဇယ မှာရိုက်ပါတယ်။ ဘုရားနားကဖြတ်သွားရင်း တိမ် နဲ့ ရေနဲ့ ဟပ်နေတာ မြင်လို့ ဘုရားပုံ ရိုက်ဖြစ်ရင်း .. ခိုလေး အစာလာတောင်းတာနဲ့ ကြုံလို့ ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါ။
အသံရဲ့အပြင်ဘက် ပုံကို မဟာကြီးဘုရား ..ပဲခူးမှာ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရင်လေးတွေဆွမ်းခံမကြွခင်လေး ..ခေါ်ပြီး Making လုပ်ပြီးရိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံအတွက် .. ညီညီ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လာလေ့ ပုံကို စိမ်းလန်းစိုပြည်မှာ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လည် ၂ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မှာရိုက်ဖြစ်တာပါ။ လူအရိပ် တိုနေတာကိုကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။ ဒီပုံ အတွက် Azzuri ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Noble Silence ပုံကို မော်လမြိုင် ဖားအောက်တောရ က သိမ် (နံမည်မမှတ်မိ) မှာ တရားထိုင် ချိန်မှာရိုက်ပါတယ်။ အချိန်က တော့ ညနေ ၅ နာရီ စွန်းစွန်းလောက်မှာပါ။ ဒီပုံအတွက် ဦးပဇင်းပြည့်၊ညီညီ နဲ့ ပြောင်ကြီး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေး မနက်စောစော ရွှေတိဂုံ ဘုရားသွားတုန်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ ပက်ထားတဲ့ ရေမှာ ဘုရားအရိပ်ပေါ်နေတာလေး တွေတုန်း ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပဲခူး – လေးမျက်နှာ ဘုရား ပုံကို ရိုက်ဖို့ ပဲခူးမှာညအိပ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ည ဘက် ရ နာရီ ကနေ ၈ နာရီ ကြားမှာ ရိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံအတွက် ညီညီ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ ဓာတ်ပုံပိုစ့် ကို ကြည့်တဲ့သူ၊ မကြည့်တဲ့သူ၊ comment ပေးတဲ့သူ၊ မပေးတဲ့သူ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။